Bill Duke dia nilaza fa i Jean Claude Van Damme dia noroahina tamin'ny 'Predator' noho ny tsy fahampian'ny rano - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Bill Duke dia nilaza fa i Jean Claude Van Damme dia noroahina tamin'ny 'Predator' noho ny tsy fahampian'ny rano
Bill Duke dia nilaza fa i Jean Claude Van Damme dia noroahina tamin'ny 'Predator' noho ny tsy fahampian'ny rano
Raha tsy ampy rano dia afaka mandroaka azy io isika
by Trey Hilburn III Septambra 12, 2021 3,939 hevitra
Vao tsy ela akory izay dia nanjary sosotra be ny Internet raha maheno fa mpilalao sarimihetsika iray no niasa tamina studio. Andro 12 ora feno fiantsoantsoana dia tsy maninona isika raha tsy miasa eto amin'izao tontolo izao miasa tsy gig gig, fa ny mpisehatra izay voatery miasa mandritra ny ora maro ary hihiakan'ny talen'izy ireo no fahavalon'ny vahoaka voalohany. Eny, saika hikorontana ny Internet ary ara-drariny koa, ao amin'ny Jean-Claude Van Damme voaroaka… alao ity… tsy ampy rano ary saika maty.
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroantsika dia mahalala fa i Jean-Claude Van Damme dia handeha hilalao ny mpiremby. Ny endrik'ilay mpihaza mahafinaritra dia nanana endrika hafa mihitsy. Ny fijery taloha dia bibikely be fijery mifanohitra amin'ny nahatongavany. Kevin Walker Hall dia nandray ny andraikitry ny mpiremby ary nanao ny anjara toeran'ny sary masina.
Van Damme dia nilaza foana fa ny nofinofiny tamin'ny sarimihetsika dia matory alina. Tsy ampy rano sy marary tsy tapaka izy noho ny akanjo sy hafanana anaty ala tsy mampino.
mpiremby Ilay mpilalao sarimihetsika Bill Duke dia niresaka tamin'ny Murder Master Music ary nilaza fa tena manana olana goavana amin'ny tsy fahampian-drano ny mpiara-miasa aminy.
Tany amin'ny alan'ny Puerto Vallarta sy Palenque izahay dia efa ela. Tsy haiko raha fantatrao ity tantara ity na tsia, fa ilay Predator hitanao dia tsy ilay Predator voalohany. Ilay Predator tany am-boalohany dia zavaboary kely kokoa ary hametraka ny vokatra manokana amin'ny vatany amin'ny famokarana aorian'ny famokarana. Ka nitafy akanjo mangingina izy ary napetrak'izy ireo tamin'ny tariby ary nanidina teny ambony hazo izy niaraka tamin'ny tariby teo an-damosiny toa ny nanidina. Efa indroa izy no lany tamin'ny tsy fahampiana rano, ary nanatona azy ny mpamokatra ary nilaza hoe: 'Raha lany indray ianao dia horoahiko ianao.' Ary hoy ilay tovolahy: 'Tsy fanahy iniana aho fa maty! Tsy ampy rano aho! ' Hoy ilay mpamokatra: 'Aza lany andro intsony.' Roa herinandro no lasa, ary maty ny lehilahy. Nandeha ny mpamokatra ary nandroaka azy. Jean-Claude Van Damme io olona io. ” Nilaza tamin'i Murder Master Music i Duke.
Azonao an-tsaina ve ny fandroahana anao noho ny tsy fahampian'ny rano? Tsy mampino.
Tamin'ny farany dia niasa tsara ho an'i Van Damme. Ilay lehilahy dia lasa kintana hetsika haiady lehibe. Noho izany, azoko antoka fa efa niditra an-tsehatra tamin'ny lasa izy. Fanampin'izay, azonao an-tsaina ve raha fa mpiremby fitoriana no efa nampiasana? Mety tsy ho lasa ilay kapoka naharesy azy io.
Ahoana ny hevitrao momba ilay kinova Van Damme tany am-boalohany? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.